‘बीपीको डायरी’ बजारमा
बीपी कोइरालाले २००८ देखि २०१३ सालसम्म लेखेको पुस्तक ‘बीपी कोइरालाको डायरी’ बजारमा आएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लोकार्पण गरिएको कार्यक्रममा बीपीपुत्र शशांक कोइराला, नरहरि आचार्य, प्रा.डा. शेखर कोइराला, लेखक पुरूषोत्तम बस्नेत, डा. शोभाकर पराजुली, पत्रकार चन्द्रकिशोर, पुस्तकका सम्पादक तथा सङ्कलक पदमबहादुर थापाको उपस्थिति रहेको थियो ।
पुस्तकमाथि बोल्दै प्रा.डा. शेखर कोइराले यो पुस्तक डायरी मात्र नभएर युवा पिडीका लागि संघर्षको अभिलेख रहेको बताए । यस्तै नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता नरहरि आचार्यले बीपी कोइरालाको डायरी आफूले तीन पटकसम्म पढिसक्दा पनि अझै चित्त नबुझेको बताए ।
भावुक मुद्रामा बाबासँगको आफ्नो संस्मरण सुनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा बीपी पुत्र डा. शशांक कोइरालाले यस पुस्तकले बीपी अध्ययन गर्न चाहनेहरू र साहित्य, चित्रकारिता बुझ्न चाहनेहरूका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सहज रहेको बताए । कार्यक्रममा डा. शोभाकर पराजुलीद्वारा लिखित पुस्तक लोकतन्त्र र समाजवादको परिचर्चा पनि भएको थियो । शिखा बुक्सले प्रकाशन गरेको ‘बीपी कोइरालाको डायरी’को मूल्य ३ सय ५० रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २४, २०७६, ०२:३४:००